Inona no ho hitanao any Nepal | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hita any Nepal
Mariela Carril | 07/10/2021 17:00 | Nepal, Inona no ho hita
Nepal Izy io dia firenena kely misy sisin-tany izay any Azia, amin'ny zanatany indianina. Any Himalaya no misy azy ary i Shina, India ary Bhutan no mpifanila vodirindrina aminy. Eny, lehibe kokoa ny mpifanila vodirindrina aminy nefa mbola kely ihany, manana endrika marobe isan-karazany i Nepal ary harena manan-karena tena mahaliana.
Androany, ao amin'ny Actualidad Viajes, mifantoka amin'ny inona no ho hita any Nepal.
2 Inona no ho hita any Nepal
Firenena kely sy mahitsizoro izy io 147.516 kilometatra toradroa ny velarany. Afaka miresaka momba ny faritra telo isika: ny Terai, ny havoana ary ny tendrombohitra, amin'ny fomba telo, peratra ekolojika telo notapahan'ny fantsakan'ny renirano maromaro. Terai no sisintany amin'i India ka mafana sy mando ny toetrandro eto.
Ireo havoana, eo akaikin'ny tendrombohitra, dia misy haavony miovaova eo anelanelan'ny arivo sy efatra arivo metatra, ary tena lonaka sy faritra onenana satria faritra misy lohasaha manankarena. Ilay any Kathmandu, ohatra. Ary farany, ireo tendrombohitra, izay misy ny Tendrombohitra Everest sy ny hafa avo tsy hita noanoa. Io no ampahany mifanila amin'i Sina. Na eo aza ireo faritra ara-jeografika telo ireo, ny marina dia misoratra anarana ny firenena faritra elanelika dimy: ny antonony, ny tropikaly sy ny subtropika, ny hatsiaka ary ny any ambanin'ny arctic.
Mandra-pahatongan'ny taona 90 dia mpanjaka fanjakana tanteraka ny firenena izay lasa monarchie parlemantera taty aoriana. Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX sy taorian'ny fihetsiketsehana malaza maro tamin'ny 2007 dia nofoanana ny mpanjaka ary tamin'ny fifidianana 2008 dia nandresy izy Antoko Kaominista Nepal Fitsarana Maoista. Tamin'ny 2015, vehivavy iray no nahazo ny filoham-pirenena, Bidhya Devi Bhandan.
Miresaka momba ny nanjakan'i Nepal nandritra ny fotoana lava tao amin'ny firenena mpanjaka isika mba hahafahantsika manomboka mitsidika ny tanànan'ny mpanjaka Patan. Eto dia misy tempoly, tsangambato ary monastera tsy hita isa ary harena ara-kolontsaina lehibe. Mahafinaritra ny maritrano ary lehibe ny tranon'ny lapa. Mila mitondra fahatsiarovana miaraka aminao ianao ary amin'ity lafiny ity dia tsara ny fahatsiarovana vy sy hazo na sary hosodoko Thangka.
Durbar Square dia toerana fakana sary an'arivony ary iray amin'ny telo amin'ireto fomba io ao amin'ny Lohasahan'i Kathmandu. Ho hitanao ny gorodona biriky mena tsara tarehy indrindra eto an-tany, ohatra. Ity ny Tempolin'i Krishna.
Ny HimalayaMazava fa isaina amin'ny lisitra izy ireo. Mahagaga, ohatra, ny fahitana an'io tandavan-tendrombohitra mahafinaritra io, ohatra, ilay avy any Nagarkot, amin'ny haavon'ny roa arivo metatra. Ity tendrombohitra ity no avo indrindra faharoa ao amin'ny Lohasahan'i Kathmandu ary ny fijery dia iray amin'ireo karatra paositry ny besinimaro indrindra, raha ny Mount Everest…
Raha miresaka momba an'i Everest ianao, raha tsy te hihanika azy ianao dia afaka manana fomba fijery tsara avy amin'ny rivotra. Misy sidina mpizahatany ora iray izay manome fomba fijery tsara ary azo antoka fa tsy hay hadinoina.
Mahafinaritra ny Faritra Annapurna. Ny fitsangantsanganana dia azo raisina avy any Pokhara mankany amin'ity faritra ity izay tena paradisa. ny lalan-tongotra Miampita vohitra tsara tarehy izy ireo, toerana fivahinianana masina, ala kesika ary farihy an-tendrombohitra mangarahara. Fitsidihana tena atolotra anao dia ny Annapurna Circuit, ho an'ny tontolony, na ny lalana Ghorepani Poon Hill, ohatra. Ireo lalana ireo dia manana ambaratongam-pahasarotana samihafa, koa raha tsy anao ny mandeha dia afaka misoratra anarana foana ianao a mitsangantsangana mamakivaky ny riaka na mandeha paragliding.
Pokhara izy tenany dia toerana tsara hihaonana, tena tsara tarehy, ary avy eo safidy hafa dia ny mankany amin'ny Sarangkot Scenic Point ary mankafy ny fiposahan'ny masoandro. Pokhara nanomboka tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo, fony izy io dia teboka iray amin'ny làlan'ny varotra eo anelanelan'i India sy Shina, ka na dia androany aza noho io toerana io, noho ny tantarany sy ny sakafo matsiro azy, dia mbola toerana itodihana malaza io.
Ho azy Bhaktapur dia manolotra fomba fijery mahafinaritra momba ny Himalaya, fa misy koa pagoda sy tempoly azo tsidihina. Voatahiry tsara ireo pagoda ary mendrika ny fitsidihana ireo lapa sy tempoly. Kolontsaina tokoa ny tanàna ary mankalaza fety ara-pivavahana maro.
Raha tianao ny manjono, milomano na lakana dia misy ny Farihy Phewa, farihy rano velona misy azy foana misy sambo miloko hofaina, boardwalk mahafatifaty ary bara kely maro. Na mandeha eny amoron'ny ranomasina ianao, na misotro labiera na mankafy tsotra izao ny natiora sy ny maritrano Nepalese marefo izay mandravaka ny zava-drehetra.
Any amin'ny 1550 metatra ny haavon'ny Dhulikhel ka rivotra madio sy fahanginana no azo antoka. Tanàna tranainy izy io, misy arabe cobbled etsy akaikin'ny trano nentim-paharazana misy varavarana sy varavarankely miloko. KOA misy stupas sy tempoly hijerena sy hakana sary.
El Valan-javaboary Chitwan, ao amin'ny faritr'i Terai, manamorona an'i India, dia toerana fizahan-tany malaza iray hafa. Betsaka ny bibidia, ao anatin'izany ny rhino, gidro ary ny antilopa, ary tanin'ny vahoaka Chepang izy io. Raha tianao ny safaris, ity no toerana tsara indrindra any Nepal, na dia misy valan-javaboary roa hafa manolotra zavatra mitovy amin'izany aza: ny Valan-javaboary Sagarmatha ary ny Valan-javaboary Bardiya.
Ary ahoana ny Kathmandu? Anarana malaza raha misy, ity lohasaha mahafinaritra ity dia manana tranokala fito izay nambara fa lova manerantany nataon'i UNESCO. Mampalahelo fa ny horohoron-tany tamin'ny taona 2015 dia niteraka fahasimbana betsaka tamin'ity tanàna manan-tantara ity ary maharitra fotoana maharitra ny fanarenana azy, mbola ratsy kokoa aza raha mandeha lavitra ianao dia tsy hadinonao izany.
Iray amin'ireo manintona malaza indrindra eto ny Boudhanath stupa, antsoina fotsiny hoe Boudha, fa misy koa ny Tempolin'i Pashupathinath na ny Kianja Durbar, eo afovoan-tanàna, izay nisy ny fanjanahana an'ireo mpanjaka hatramin'ny taonjato faha-XNUMX. Avy any Kathmandu dia azonao atao ny fitsangatsanganana antoandro hatramin'ny Tempolin'i Swayambhunath, 2500 taona, tsara tarehy amin'ny maritrano, eo amin'ny havoana feno hazo.
Raha be dia be ny tontolo, havoana, tendrombohitra ary farihy be loatra ka mahatonga anao ho tia fiainana tsotra amin'ny tanàna iray, dia azonao atao foana ny manome azy io jereo ny fiainana an-tanàna Nepaley mahazatra. Raha mieritreritra fizahan-tany, ny tanàna izay voaomana tsara amin'izany dia ny tanànan'i Newari ao Bandipur, eo amin'ny lalana mankany Pokhara. Tanàna Himalaya mahazatra izy io ary taloha dia post eo amin'ny lalana eo anelanelan'ny India sy Tibet. Tranokala mahafinaritra re izany! Ny tranony dia tranainy, kilasika, misy tempoly, toeram-pialofana ary trano fisotroana kafe maoderina izay manaraka tsara ny fizahan-tany.
Hatreto dia topimaso ny zavatra ho hitanao any Nepal, saingy voajanahary tsy izany irery no izy. Afaka milaza isika fa ny toerana hitsidihana an'i Nepal dia ny Everst, Dolpo, Chitwan, Lumbini izay toerana nahaterahan'i Buddha, Kumari, ny Lohasahan'i Gokyo, ny Monasiteran'i Kopan na Tengboche. Ary ny azontsika atao dia misy ifandraisany amin'ireo hetsika eny an-tendrombohitra, fitsangatsanganana ara-kolontsaina sy ara-pivavahana.
Farany, Ary ny Covid 19 any Nepal? Amin'izao fotoana izao, raha manana ny fatra roa amin'ny vaksinin'ny Covid 19 ianao, dia tsy mitrandraka, dia tokony hanana izany farafahakeliny 14 andro alohan'ny dia. Raha tsy manana vaksiny roa ianao dia tsy maintsy manamboatra visa alohan'ny handehananao any Nepal sy ny fitrandrahana 10 andro mialoha. Tsy maintsy mandeha amin'ny PCR ratsy 72 ora mialoha koa ianao raha tonga amin'ny rivotra ianao ary ao anatin'ny 72 ora raha tonga amin'ny tanety ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Inona no ho hita any Nepal
Inona no ho hita ao amin'ny La Gomera
Ny tanàna tsara indrindra any Huelva